Fakafakao ny Twitter manaraka anao | Martech Zone
Schmap dia namoaka a Fanadihadiana momba ny piraofilina Twitter fitaovana izay feno ihany. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fanadihadiana fampitahana ireo mpanaraka anao amin'ny kaonty hafa, Schmap dia afaka manome anao fandinihana amin'ny antsipiriany momba ny toerana niavian'ny mpanaraka anao, ny asan'izy ireo, ny demografika ary ny fitaomany aza. Misy fanadihadiana fototra maimaim-poana ary koa a fandalinana feno. Ny vidin'ny famakafakana dia miankina amin'ny karazana kaonty dinihinao fa ny $ 25 ho an'ny mpampiasa tsy ara-barotra ka hatramin'ny $ 125 ho an'ny orinasa.
About Schmap: Schmap dia mpamatsy tolotra teknolojia toerana ary mpanonta eo an-toerana, manana fahaiza-manao faratampony eo amin'ny fihaonan'ny tranonkala eo an-toerana, ara-tsosialy, ara-barotra ary ny tranonkala tena izy. Fantatra amin'ny alàlan'ny torolàlana an-tanàna sy ny serivisy Twitter malaza izahay.
Ireto misy antontan'isa zaraina avy amin'ny famakafakana feno ho an'ny @douglaskarr (izay nihoatra ny 30,000 XNUMX ny mpanaraka!).
Araka ny firenena
Avy amin'ny Twitter Influence
Nosoratan'i Twitter Action
Nandritra ny fotoana naharetan'izy ireo tao amin'ny Twitter
Amin'ireo karazana kaonty Twitter arahin'izy ireo
Misy statistika fanampiny ihany koa, ary ny famakafakana amin'ny antsipiriany dia azo alaina ho CSV. Raha te hanana antoka ianao fa mahasarika ny mpihaino marina dia mamporisika anao aho hividy ilay fandalinana feno. Ny angona vokatro azoko dia nanamarina ny paikadiko hisarihana mpanaraka Twitter ary faly amin'ny valiny aho. Ny hany faritra ahiako ho ahy dia ny tsy fanondroako ambany ireo vehivavy mpanaraka ahy. Angamba io no fandefasako resaka geek tsy tapaka… azo antoka fa asa vitsivitsy hatao.
Tags: schmapschmap.itTwitterfamakafakana twitterdemografika twitterfanadihadiana ny mpanaraka ny twitterTwitter followers
Iza no tompon'ny mpanaraka Twitter anao?